WAA JACEYL AAN CAADI AHAYN!!! | Wacyigelin's Blog
Ahmed Galaydh on U ISTAAG SOMALIA MPLS MNmohamed anshur on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…سليمان on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…siciid on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Abdirizaak ahmed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…mohamed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Dr. Farxaan jama on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…Peter Greste case: i… on Al-Jazeera’s Peter Grest…Johnd761 on LOS ANGELES CITY PLANER FAISAL…Mahad xiddig on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on العلم والإيمان – د. مصطف…Bucul on DHOWR ASKERI OO KA GOOSATAY JA…En ismail abdi yasin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…yassin saleh osman on KA TASHADA CADAAWOHOO ISKU TII…	WAA JACEYL AAN CAADI AHAYN!!!
Posted on October 7, 2013 by wacyigelin	Miiska ayuu dul yaalaa. Waxaa soo ag istaagaya nin da’diisa aan ku qiyaasay 28 ilaa 30. Hadba dhinac ayuu ka eegayaa. Marki danbe ayuu kor u qaaday oo hadba dhinac ka fiiriyay asagoo wejigiisa ay ka muuqato farxad iyo weliba tacajub. Marka aad eegto sida uga dhowrayo inuu ka dhaco waxaad leedahay ma canug uu dhalaybaa. Midbaku waa jaale. Dabada waxaa uga yaal bir wareegsan oo uu ku dheganyahay rabar. Dhinaca kale waa uu ka fiiqanyahay waana madow fiiqdintu.
Haddaba ninki oo aad u faraxsan ayaa meeshiisi dhigay. Nin kale oo fadhiya ayaa ku yiri waad qaadan kartaa hadii aad jeclaatay. Ninki oo farxad la kala batay ayaa qaatay asagoo leh maantay waa sidaan u qaatay dibna uma dhigi doono.
Aqristoow sheeygaas aan kor ku xusay waa qalin qoriga. Ninkan jeclaadayna waa nin asagoo wayn baadiyo laga keenay. Laakiin jeclaaday qalin rasaaska ama qalin qoriga hadba sidaad u taqaanidba.
Meesha uu qalin qorigani yaalo waa iskuul seeraale ah (iskuuladi la dhigan jiray galbihii iyo habeenki oo loogu tala galay in dadka waaweyn wax lagu baro). Ninkan oo marki baadiya laga keenay xamaali ka ahaa suuqa ayaa jeclaaday inuu wax barto laakiin duruufta oo aad ugu liidata xitaa qalin iyo buug inuu iibsado waa ay ku adkeyd. Ninka qalin rasaaska siiyay waa macalinka fasalkaas oo kadibna ugu daray bug uu wax ku qorto.
Haddaba ninki sidaas ahaa wuxuu dhigtay seeraalihi ilaa uu ka dhameeyo dugsi sare dabadeedna uu shaqo helo. Markii uu shaqadi helay intaas kuma joogsan ee wuxuu dalbaday inuu jaamacad galo asagoo galay Kuliyadi Lafoole ee waxbarashada. Laba sano kadib waa uu ka qalinjebiyay noqdayna macallin dugsiyada sare. Asagoo xasuusan arimihii uu la soo maray qalinka iyo jaceylki uu u qaaday ayuu wuxuu codsaday in shaqada dugsiga sare loogu daro inuu wax ka dhigo dugsiyada seeraalaha. Taas waa laga ogolaaday iyadoo weliba mushaarki loo kordhiyay.
Sidaas ayuu ninki qalin rasaaska jeclaaday ku bilaabay inuu asaguna kuwo kale oo sidi asaga u jecel uu u siiyo waxna ku bartaan.
Weli waa isla qalin rasaaskiye, Waxaan soo xasuustay sheeko kale oo ku saabsan qalin rasaaska balse tan aad uga duwan. 1989, ayaan waxaan dhiganaynay jaamacadda umadda Soomaaliyeed oo Gahayr loo yqaaney. Waxaa noo dhigi jiray macalimiin talyaani ah oo aan in yar magacyadoodi ka xasuusto. Ninka keliya oo aan magaciisa si wanaagsan u xasuusto waa professor Lucaroni oo noo dhigiyayey maadada fisigiska. Wuxuu ahaa nin calaan ah oo lug iyo gacan jiis ka ah balse taasi kama reebin inuu ahaado nin aad u kaftan badan. Haddaba, ujeedadeydu maahayn inaan kaaga sheekeeyo macalimiinta talyaaniga ee waa inaan kuu sheego sida qalin rasaaska ay qusayso.
Waxaa wax noo dhigi jiray dhowr naagood oo Talyaani ah nana bari jiray luqadda talyaaniga. Waxaa jira mid ka mid ah ardadi fasalka inuu mar walba weydiisto macalimiinta qalin. Inta badan waxay wataan qalin rasaas dhowr xabo ah malaha waxaa loogu sheekeeyay Soomaalidu waa faqri ama waa bukhalo oo qalimaanta ma iibsan karaane. Ninkanna maalin walba qalin ayuu waydiistaa oo waxaa la siiyaa qalin rasaas. Waa qaataa soomana celiyo. Nasiib daro maalinti danbe ayuu naagihii mid ka mid ah waydiistay qalin. Naagtan oo sida ay sheegtay dhow jeer qalin siisay ninkan ayaa tiri waad qaadataa soomana celisid laakiin maantay kusiimaayo. Runti waa ay qaylisay si ay u ihaanayso ninkan. Mid ka mid ah dhalinyarada oo agtiisa fadhiyay oo u damqaday ayaa siiyay qalin. Runti, annaga oo dhan waa na saameeyeen erayada ay naagtu ku hadashay. Maxaa yeelay mid naga mid ah hadii wax laga sheego innaguna asagoo kale ayaan nahay marka waa inaan wada damqanaa.
Nasiib daro, ninki isma garan ee weli wuxuu meeshiisi kasii weday qalin rasaas inuu ka dalbado macalimiinta. Waxay iila muuqataa inaanu ninkan qalin la’aan haynin ee uu jeclaa qalin rasaaska. Waxaa kaligeey isu sheegay in ninkan gurigiisa ay tubanyihiin qalin rasaasyadu, Waxaa maskaxdaydu ii sawirtay ninkan oo galab walba intaanu wax aqriska bilaabin koob shaahi ah soo shubta lana fariista oo dhowr daqiiqadood indhihiisa ugu raaxeeya muuqaalka wanaagsan ee qalin qoriga asagoo shaahiisa dhakabsanaya. Waxaa kale oo laga yaabaaba in ninkan ay aad dhiirigelin uga helayey arigtida qalimaanta faraha badan ee uu miiska dul dhoobay taasi oo keenaysa inuu si hagaagsan wax u aqarsado iyadoo qurxda aan lasoo koobi Karin ee qalin qorigu ee dhex maaxanayso maskaxdiisa.
Filed under: Uncategorized « Qosol: Mr. Bean (Rowan Atkinson) oo jilaya kabalyeeri Hindi ah!!! WARAYSI LALA YEESHAY CABDI QAYBDIID »